20% Discount above 10000Ks
20% Discount above 10000Ks အသေးစိတ်
ပရိုမိုးရှင်း Busan Fish Cake
လူငယ်လေးတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ စံရိပ်ငြိမ်းဂမုန်းပွင့်က Busan Fish Cake ရဲ့ 20% Discount
Busan Fish Cake ဆိုင်မှာဆိုရင် K Drama တွေမှာတော်တော်များများမြင်ပြီး သရေအမြဲကျနေရတဲ့ ကိုးရီးယား ငါးအသားချောင်း နဲ့ တော့ပိုကီတွေ အဓိကရရှိပြီးတော့ တခြားကိုးရီးယား အစားအသောက်တွေ အစုံအလင်ရနိုင်တဲ့ လူငယ်တွေအကြိုက် Korean Street Food ဆိုင်လေးပါ…
ဈေးနူန်းချိုသာပြီး အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ Fish Cake များဖြစ်တဲ့ Seaweed Fish Cake, Sausage Fish Cake, Crab Fish Cake, Square Fish Cake, Stick Fish Cake, Ball Fish Cake တွေရရှိနိုင်ပြီးတော့ အရသာကို အချိုနဲ့ ရှိတဲ့ အတွက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ စားသုံးနိုင်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် Busan Fish Cake မှာလူကြိုက်အများဆုံး အစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တိုင်ချက် တော့ပိုကီ ၊ ပဲခေါ်က်ဆွဲ နဲ့ Ramen ခေါ်က်ဆွဲတွေအပြင် မာလာဟော့ပေါ့ နဲ့ မာလာရှမ်းကောက အစတစ်နေရာတည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
Fish Cake တွေနဲ့ အင်မတန်လိုက်ဖက်လွန်းလှတဲ့ Dinks လေးပါရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးပါ…
10,000 Ks နဲ့အထက်စားပြီးတော့ ပရိုမိုးရှင်းရရှိမယ့် Menu တွေကတော့ Fish Cake , Tokpoki နဲ့ Drinks တွေအတွက် 20% Off Discounts ပါ...
ဒါကိုမှ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Mobile App ရဲ့ “Use Now” ခလုပ်လေးကိုနှိတ်ပြီး ကျလာတဲ့ “Success” စာမျက်နှာလေးကို Bill ရှင်းတဲ့အချိန်ပြသပြီးတော့ ရယူနိုင်ပါတယ်…
Busan Fish Cake Address
Address – 4th Floor , 417A, Gamone Pwint Shopping Mall, Insein Road, San Yeik Nyein Yangon.
PH – 09 761 526632
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 099 69910128 ကိုရုံးချိန်းအတွင်း ဆက်သွယ် စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Promotions Period - 25.Jan .2020 - 01.Aug. 2020
Busan Fish Cake ဆိုင်
Busan Fish Cake 4th Floor,417A.Gamone Pwint Shopping Mall Insein Road,San Yeik Nyein.
ဖုန်းနံပါတ် : 09 761 526632
Ends Saturday, August 01, 2020